Iphrofayela Yenkampani | I-Anping County Kaixuan Insimbi Engagqwali Imikhiqizo Co., Ltd.
Cindezela i-Adapter Fitting
Hose Barb nokufaka
1PC Ball Amaphayiphu
2PC Ball Amaphayiphu
3PC Ball Amaphayiphu
Ball Amaphayiphu nge pad obandayo
2PC Ball Valve Nge Obandayo Pad
Mini Ball Amaphayiphu
Amaphayiphu Ebhola we-PEX
Thina, ikomidi lokukhiqiza nokuhweba, elikhiqizayo nelithumela ngaphandle amapayipi nokufakwa kwebhola kusukela ngo-2002, ikakhulukazi ukugxila ekungeneni kwepayipi lensimbi engagqwali nakuvalvu wensimbi engagqwali.
Siyiqembu eliphethwe ngumndeni, uMnu Yan abafowethu basungule i-KX Co (Anping County KaiXuan imikhiqizo yensimbi engagqwali Co, Ltd.) futhi bakha lesi sitshalo ngo-2002. Isizukulwane sikaMnu Yan abazalwane abasebasha sihola ibhizinisi lomhlaba wonke likaKX Co. ukuthuthukiswa, amasu, nokumaketha.
Zonke izisebenzi zizama ngakho konke okusemandleni ukwenza ukufakwa kwamapayipi okungcono kakhulu nama-valve okuzokhonza kanye nempendulo kumakhasimende, sonke sifuna ukuthatha lo msebenzi siqhubeke njalo, singabahlinzeki bezinto zokuqina ezizinzile kakhulu kanye neqembu lakho elithembekile.
Ukuletha imikhiqizo yekhwalithi ye-premium ngamanani wokuncintisana. Kepha, akusona isizathu esisodwa esenza amakhasimende akhethe i-KX Co. Ukuthengisa umkhiqizo kuyinto eyodwa; ukulethwa ngokushesha nangendlela efanele kungenye. Kwa-KX Co., ukulethwa okusheshayo, okuthembekile kanye nekhwalithi yesevisi kubhekwe kakhulu.
Sithatha ikusasa: insizakalo eyiyo kanye nokusheshisa, ukulethwa okunembile, njengoba nje namakhasimende ethu elindele kithi: "Uphakeme ngentengo nekhwalithi!"
Umkhiqizo omuhle uzikhulumela wedwa ukuthi kuhlale kungumbono oyigugu.
Indawo yethu yokukhiqiza
Kwemboni yethu ihlanganisa indawo ka-20000 metres square, ekubunjweni workshop ka-5000 metres square, machining workshop 5000 square metres.
Inesikhungo sokuklama sobuchwepheshe nesikhungo sesevisi yezobuchwepheshe ukunikeza isiqinisekiso sobungcweti sekhwalithi yomkhiqizo nesipiliyoni samakhasimende.
Umthamo wokukhiqiza wanyanga zonke ungamathani ayi-100. Sinezinhlobonhlobo zamathuluzi okubumba e-SP114 kanye namathuluzi wesikhunta e-ISO4144, njll. Isikhunta esizenzele ngokwaso sinezinto zokukhiqiza zansuku zonke zezingxenye ze-wax ezingama-3,000, okuyizikhathi eziphindwe kathathu lezo zesikhunta esenziwa ngesandla.
Umbiko Wonyaka Wenzuzo
Ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo nezinsizakalo ezibaluleke kakhulu.
Ukuhlinzeka ngamathuba amahle kakhulu kubasebenzi esigabeni ngasinye somsebenzi wabo ukuthi basebenze amahora amade nanzima ukuthola amandla abo aphezulu. Ukwenza ngcono ikhwalithi yempilo emphakathini. Ukwakha imboni yethu ibe yimboni ehamba phambili yokwengeza umkhiqizo kanye nokwakha imisebenzi emisha, ukudala ukutholakala okuphephile kwezimpahla nezinsizakalo ezikwaziyo ukuhlangabezana nezidingo zesikhathi esizayo.
Ukwakha impilo esezingeni eliphakeme futhi esezingeni eliphakeme yabo bonke abasebenzi nemindeni yabo.
Sinikezela ngemikhiqizo evelele kanye nensizakalo engenakuqhathaniswa ukuthi, ndawonye, ​​iletha inani le-premium kumakhasimende ethu.
Siphakamisa amazinga aphezulu obuqotho kuzo zonke izenzo zethu.
Sisebenza ndawonye ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu nokusiza inkampani ukuthi iwine.
Siyabazisa abantu bethu, sikhuthaza intuthuko yabo futhi siklomelisa ukusebenza kwabo.
Sikhombisa intando enamandla yokuwina ezimakethe nakuzo zonke izici zebhizinisi lethu.
Sizoba umlingani webhizinisi oligugu kakhulu kuwo wonke amakhasimende ethu.
Isikhulu Esiphezulu: +86 15633514444
I-QC Dept: + 86-318-8095269
Umnyango Wezokuthengisa: + 86-318-7532676
Umnyango Wokukhiqiza: + 86-318-8095396
Ukutshalwa kwezimali kubizwa nangokuthi ukulahleka kwe-wax casting noma ukunemba kwe-precision, okuyindlela yokwakha insimbi yokukhiqiza izingxenye ezinokubekezelelana okuqinile, izimbotshana eziyinkimbinkimbi zangaphakathi nobukhulu obuqondile ....
1. Ukuhlanzeka okuhle kakhulu kwepayipi lensimbi engagqwali nokufakwa wonke umuntu uyazi ukuthi insimbi engagqwali yinto ebonakalayo enempilo engafakwa emzimbeni womuntu ....
Izilinganisi zamapayipi zensimbi ephezulu ze-high quality: 1. Isigaxa sentambo kufanele sibe bukhali, size sibe ne-pitch futhi sibukeke sicwebezela. 2. Isisekelo sentambo singathintwa ngesandla, ...
© Copyright - 2019-2020: Anping County Kaixuan Stainless Steel Products Co., Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.